New York Waxay Mamnuucaysaa Haysashada Xashiishadda Laga bilaabo Agoosto 27th • Mukhaadaraadka Inc.eu
Bogga ugu weyn Sharci dejinta & Sharci dejinta New York waxay go'aamineysaa haysashada xashiishadda laga bilaabo 27 Agoosto
New York waxay go'aamineysaa haysashada xashiishadda laga bilaabo 27 Agoosto
albaabka daroogada July 30 2019
maqaal by daroogada July 30 2019
ALBANY, NY - Gudoomiyaha magaalada New York ayaa saxiixay sharci Isniinta kaas oo jilcinaya ciqaabta haysashada xashiishad yar isla markaana ogolaan doonta in xukunada qaar la laalo.
1 Gargaar deg deg ah ma jiro
2 Tirtirka iyo xiritaanka diiwaannada dambiyada
Sharcigii uu dejiyey Gov. Andrew Cuomo waa la saxeexay, isagoo sharci darro ku ah haysashada xashiishadda.
Ganaaxu waa $ 50 lahaanshaha wax ka yar hal ounce, ama ugu badnaan $ 200 midkiiba ilaa laba wiqiyadood.
Sharcigu wuxuu kaloo u baahan yahay in diiwaannada la xiriira kiisaska marijuana heerkoodu hooseeyo ama lagu calaamadeeyo inay tirtireen ama burbureen. Waxay dhaqan galeysaa 30 maalmood ka dib markuu guddoomiyuhu saxeexay sharciga. 27 Agoosto waa taariikhda hirgalinta sharciga.
"Bulshooyinka si aan kala sooc lahayn ayay u saameeyeen sharciyada xukuma marijuana muddo aad u dheer, maantana waxaan soo afjaraynaa cadaalad daradaan mar iyo dhamaanba," ayuu Cuomo ku yiri hadal uu soo saaray.
Gargaar deg deg ah ma jiro
Kuwa u dooda sharci ahaanta xashiishadda cannabis waxay qirayaan in sharciga uu yahay talaabo horay loo qaaday, laakiin waxay sidoo kale sheegeen in ay ku guuldaraysteen in ay wax ka qabato webka cawaaqib xumada ka dhalata in xashiishadda ay tahay xadgudub sharci darro ah.
Erin George oo ka tirsan jariidada Citizen Action ee magaalada New York ayaa yidhi: “Booliska marwalba waxay heleen dariiq ay ugala wareegaan xashiishka maandooriyaha”.
Dadku wali way la kulmi karaan xadgudubyada tijaabada ah iyo cawaaqibka socdaalka ee sharciga qaanuunka, ayuu yidhi George.
Melissa Moore, oo ah ku xigeenka agaasimaha Gobolka New York ee Isbahaysiga Siyaasadda Daroogada, ayaa sheegtay in sharciga uu had iyo jeer u oggolaanayo mas'uuliyiinta inay ku dabaqan hirgelinta xashiishadda dadka iyo beeshooda.
Tirtirka iyo xiritaanka diiwaannada dambiyada
Marka loo eego Qeybta Adeegyada Caddaaladda Dembiyada ee New York, ugu yaraan dadka 24.400 ma sii lahaan doonaan taariikh dambiile sababtoo ah qaadashada sharcigan cusub.
Sida laga soo xigtay xafiiska, sharcigu wuxuu horseedi doonaa xiritaanka in ka badan xukunnada 200.000 ee loogu talagalay xad-gudubyada heerka marijuana-hoose.
Sharci dejiyayaasha gobolka ayaa ka fiirsaday sharciyeynta xashiishadda cannabis dadka waaweyn sanadkan, laakiin sharcigaas ayaa istaagay ka dib markii hoggaamiyeyaasha gobolku ay ku heshiin waayeen faahfaahinta muhiimka ah maalmihii ugu dambeeyay muddada baarlamaanka.
Cuomo iyo madaxda ugu sareysa ee sharci dejinta dhammaantood waa dimoqoraadiyad.
Mawjad kuleyl? Qaado cabitaan cannabis oo macaan
Faa'iidooyinka CBD ee ciyaartooyda: sida CBD iyo waxqabadka isboortiga ay noqon karaan kuwa lammaanaya
Bixinta xashiishadda cannabis ee Ireland waa…
Kumanaan shirkadood ayaa joojiyay tijaabada daroogada ee adduunka oo dhan…